Sarimihetsika sarimihetsika ho an'ny Android. | Androidsis
Sintomy ny tsara indrindra sary mihetsika horonantsary ho an'ny Android-nao. Ataovy amboary ny findainao na ny takelakao amin'ny rafitra fiasan'i Google miaraka amin'ireto sary manaraka ireto amin'ny sarimihetsika sy andian-tantara be mpitia indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Raha te hanana ny mpandray anjara amin'ny andian-tsarimihetsika tianao na telefaona amin'ny findainao Android ianao, dia azo antoka fa hampifaly anao ity safidinao fiaviana ity. Hitanay ny volan'ny sarimihetsika sarimihetsika malaza indrindra sy andian-tantara amin'izao fotoana izao. Afaka mitondra azy ireo an-telefaona hatrany ianao.
Ao amin'ny galeriana eto ambany dia ho hitanao ny sary mihetsika tsara indrindra amin'ity sokajy andiany sy sarimihetsika ity, misy amin'ny vahaolana tsara indrindra. Safidio izay mety indrindra amin'ny telefaoninao!
Efa naniry bebe kokoa ve ianao? takelaka sary lamba sa ho an'ny finday? Ao amin'ny rohy izay napetrakay taminao dia ho hitanao izy ireo.